Ukufinyeleleka - Ningbo MH
Abasebenzisi abaningi be-intanethi abakhubazekile bathola amawebhusayithi azinzima noma angenakwenzeka ukuwasebenzisa ngoba nje aklanyelwe.
Lewebhusayithi yenzelwe ukuba ifinyeleleke ngangokunokwenzeka futhi ihambisane nezinhlobo zobuchwepheshe obuguquguqukayo ezisetshenziswe ngabantu abakhubazekile, kubandakanya abafundi be-screen.
Njengalokhu, izivakashi zingakwazi ukulawula ubukhulu bombhalo, imibala, izitayela zezitayela kanye nokusebenzisa 'ukufakela okhiye' ekhibhodi esikhundleni segundane ukuze uhambisane namakhasi.
Ukuzulazula le website
Ukuzulazula ngalewebhusayithi, sicela usebenzise imenyu phezulu kwekhasi. Uma usebenzisa umfundi weskrini, ungasebenzisa i-key yokufinyelela i-alt - M (cindezela ukungena), lokhu kuzokuyisa kwimenyu enkulu, kusuka lapho ungasebenzisa khona ukhiye wethebhu ukuze uhambisane nezixhumanisi.
Ungashintsha usayizi wefonti wale dokhumenti ngokuthandayo ngokusebenzisa isiphequluli sakho. Ku-Inthanethi Explorer, khetha Buka, bese uthumela umbhalo, bese usayizi osithandayo.
Ungangenisa ifomethi yakho yezitayela kulewebhusayithi. Ku-Explorer khetha Amathuluzi, bese ukhetha Izinketho ze-Intanethi, bese kwi-'General 'ithebhu, khetha Ukufinyeleleka. Ukuchofoza okulandelayo kunoma yikuphi noma amabhokisi okuhlola amathathu angayinaki imibala, izitayela zefonti noma ubungako befonti. Ewindini elifanayo ungashintsha i-style yakho yezitayela ngokuchofoza ibhokisi lokuhlola elithi, 'fometha idokhumenti usebenzisa isitayela sami sesitayela' bese uvele upheqa kwiheti lakho lokushicilela bese uchofoza ok.
Sihlolisise le webhusayithi ngokugcwele kodwa sihlale sizimisele ukuthuthukisa ikhodi yethu futhi singathanda ukwazi ukuthi uthole le dokhumenti kufinyeleleke noma ngabe unenkinga.
uMhloli Ikhaya Izigaba - Ukutadisha --Zizi - I-Ribbon ne-Tape - Amaphuzu - Izikhala - Izinkinobho --Ukufakazela --Tassel & Fringe / Ukunciphisa - Ukusekela Izinto Zokusebenza - Izigaba & Izesekeli --Umshini Wokuhlola & Izingxenye --Fabric - Abanye Inkampani - Ukubuka kwe-MH - UMH Industrial - Umlando weMH - Bonisa imibukiso - Ama-Agent ethu --Imigomo yeGalleries - Ividiyo yevidiyo Xhumana nathi Indawo Yendawo --Feedback Community - Ibhulogi - Uhlelo lokusebenza --Sijoyine